Ny sary mihetsika tsara indrindra ho an'ny iPhone dia ao amin'ity fampiharana ity | Vaovao IPhone
Vellum, fampiharana misy sary mihetsika mahafinaritra toa ny fiainana mihitsy
Ny iray amin'ireo fizarana izay miova matetika amin'ny iPhone -ntsika dia ny sary an-tsary. Tianay rehetra ny manana sary an-tsary izay mahafinaritra antsika Ary, noho ny fampiasana matetika nomentsika ny finday finday avo lenta, ara-dalàna raha ilay iray anananay amin'ny fotoana rehetra dia manorisory antsika rehefa mandeha ny fotoana. Fotoana hanovana ny sary an-tsary? Ity rindranasa ity no tadiavinao.
Vellum dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra amin'ny lafiny sary an-tsary izay hitako tato ho ato. Amin'ny ankapobeny, matetika dia maharitra fotoana fohy ny fisafidianana rindrambaiko izay tiako zato isan-jato (raha ny marina, misalasala aho fa misy izany), satria ny singa toy ny symmetry na ny kalitaon'ny sary dia misy akony lehibe amin'ny fanapahan-kevitra farany. Raha toa ahy ianao dia manahy be loatra momba ireo lafin-javatra ireo dia vintana ianao.
Miaraka amin'i Vellum isika dia afaka mahita sary manara-penitra izay mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny hatsarana izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny iPhone. Toy ny amin'ny sehatry ny tsiro dia tsy misy zavatra voasoratra, ao anatin'ny fampiharana dia afaka mahita sokajy samihafa isika izany dia hahafahantsika mahita sary haingana kokoa mifanaraka amin'ny zavatra tiantsika. Ho fanampin'izany, manana lafiny hafa tena tsara izy io, toy ny fahafaha miditra amin'ny topi-maso ny fijery ny sary ho lasa ambadika na eo amin'ny efijery hidin-trano na eo amin'ny efijery an-trano - fisorohana ny fanaovana azy amin'ny famonjena tanana antsika fotoana be dia be - na ilay iray mamela anao hampihatra vokatra nanjavozavo ny zavatra nosoratany na manjavozavo hanatsarana ny fampisehoana ireo sary masina eo amin'ny solaitrabe.
Ho sarotra fa amin'ireo sokajy dimy ambin'ny folo dia tsy hahita sary lasa sary vaovaontsika vaovao isika, noho izany dia iray amin'ireo fampiharana ilaina fa mandritra ny volana vitsivitsy dia tsy ho hita amin'ny iPhone. Mety tsy tokony ho diso avy aminao koa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Vellum, fampiharana misy sary mihetsika mahafinaritra toa ny fiainana mihitsy
Ny iPhone 8 dia ho kely kokoa nefa miaraka amin'ny baterian'ny Plus
Ahoana ny fomba hizarana ny efijery ny fitaovana amin'ny namanao